Teo amin'ny faha-28 taonany i Pierre Damien no niditra tao amin'ny fikamabanan'ireo Camaldules, sambana irey avy amin'ny Bénédictins izy io. Taty aoriana kely dia voatendry ho lehiben'ny Trano Foiben'io fikambanana io tao Fonte Avellana i Pierre Damien. Izy dia olona matotra ara manan-talenta amin'ny fanoratana tononkalo, maro ny asa-sorany tamin'izany. Noho io toetrany sy ny asa-sorany dia nifidy azy ho Kardinaly Eveka tao Ostie ny papa. Nandritra ny enin-taona izy dia nomena andraikitra ho "légat", nanao ny iraky ny papa nitety an'i Italie, France ary tany Allemagne tamin'ny fifandraisana tamin'ny Amperora Henri IV.
Tsy nitsahatra nanoratra izy tamin'izany andraikiny izany. Ankoatra ny boky momba ny teôlôjia dia tsy matahotra mihitsy izy ao amin'ny asa sorany mamotsipotsitra ny kolikoly sy ny toetra tsy mendrika ataon'ireo pretra. Anisan'ny nalaza tamin'ny asa sorany ary nampisavorirvory ny olona ilay hoe "Livre de Gomore" nosratany tamin'ny taona 1049. Maro ihany koa ny tononkalo nosoratany sy ny taratasy fifandraisana no voatahiry. Ny 22 febroary 1072 moa izy no nodimandry tao Faenza rehefa avy nanao ny iraka nankinina taminy. Azo lazaina fa fitoriana ny Vaovao Mahafaly mivaingana ny fiainany ny sy asa sorany.